Ungalukhomba kanjani uhlobo lwe-ion lwabakhiqizi be-polyacrylamide nabaphakeli | Oubo
Ungalukhomba kanjani uhlobo lwe-ion lwe-polyacrylamide
Ngokuya ngohlobo lwe-ion, i-polyacrylamide ingahlukaniswa: i- anionic polyacrylamide ,cationic polyacrylamide ne- non-ionic polyacrylamide.
Ngabe umakhi we-polyacrylamide ulukhomba kanjani uhlobo lwe-polyacrylamide ion:
Abakhiqizi bePolyacrylamide banama-laboratories ochwepheshe. Ngaphezu kokuhlola izinkomba zobuchwepheshe zemikhiqizo yansuku zonke, umsebenzi waselebhu nawo udinga ukuvivinya amasampula wangaphandle. Imvamisa, lapho kutholwa isampula yangaphandle, uhlobo lwe-ion lomkhiqizo kufanele lutholakale kuqala. Ngakho-ke ungaluhlukanisa kanjani uhlobo lwe-ion? Impendulo ithi: izinkomba zobuchwepheshe zokuthola amasampula angaphandle. I-Anionic polyacrylamide ne-non-ionic polyacrylamide zihlukaniswa ngokuthola izinga le-hydrolysis. Izinga le-hydrolysis le-anionic polyacrylamide licishe libe ngama-25, kanti izinga le-hydrolysis le-non-ionic polyacrylamide licishe libe yi-5. I-Cationic polyacrylamide ihlukaniswa ngokuthola i-degree ye-ion, kanti ne-ion degree yemikhiqizo yempuphu eyomile ivamise ukuguquguquka phakathi kuka-10-60.
Ungalukhomba kanjani uhlobo lwe-polyacrylamide ion ngokusebenzisa isilingo esilula:
Ungaluhlukanisa kanjani uhlobo lwe-ion lwe-polyacrylamide lapho abasebenzi besendaweni yokuthengisa ngemuva noma bengenayo imishini yokuhlola? Okokuqala, sidinga ukuba namasampula e-anionic polyacrylamide ne-cationic polyacrylamide, bese sichitha le mikhiqizo emibili ngokuhlukile ukuze isetshenziswe. Ngemuva kwalokho chaza umkhiqizo odinga ukuthola uhlobo lwe-ion, bese ulihlukanisa ngokuphendula kwe-yin ne-yang. Thela isisombululo esincibilikisiwe se-anionic polyacrylamide kwisisombululo somkhiqizo esizohlolwa. Uma kuvela inani elikhulu lama-flocs amhlophe, kusho ukuthi isampula elihloliwe yi-cationic polyacrylamide. Uma kungekho ukusabela, kusho ukuthi akuyona i-ionic noma i-anionic. Bese ukhomba ngesisombululo se-cationic polyacrylamide, inani elincane lama-flocs likhombisa ukuthi umkhiqizo ohlolwe yi-non-ionic polyacrylamide, futhi inani elikhulu lama-flocs akhombisa ukuthi isampula elihloliwe yi-anionic polyacrylamide.
Ukubaluleka kokuhlonza uhlobo lwe-polyacrylamide ion:
Lapho ungazi ukuthi yimuphi umkhiqizo osetshenziselwa ukugeleza komhlaba kusayithi, ukukhomba uhlobo lwe-polyacrylamide ion kungasiza abasebenzisi ukuthi bahlole ngokushesha amamodeli futhi bathole imikhiqizo efana namanzi angcolile esizeni ngokushesha okukhulu.
Funda ukukhomba uhlobo lwe-polyacrylamide ion, ukuze abasebenzisi bakwazi ukuwuqonda kangcono umkhiqizo, basebenzise umkhiqizo onezici ezingcono zomkhiqizo, bazi ngawo, futhi baqaphele abahlinzeki ababi abakhohlisa abathengi
Isikhathi sokuthumela: Mar-11-2021